Hodges University Inozivisa PET Hodges Batanidza »Hodges University
Kuzadza iyo Gadziriro Yevashandi neProfessional Training Initiative: Hodges University Inozivisa Hodges Connect
Iko kusagadzikana kwehunyanzvi hwevashandi chimwe chinhu icho masangano mazhinji ekuvandudza mabhizinesi anga achikurukura kwemakore. Makambani ari kukumbira mhinduro. Hodges University iri kupindura iyo kudana neayo nyanzvi yekudzidzira chirongwa, Professional Dzidzo uye Kudzidziswa (PET), inonzi Hodges Unganidzo.
"Hodges Connect yakagadzirirwa kugadzirira vashandi pamwe nehunyanzvi-hunodiwa hunyanzvi hunodiwa kuti ubudirire mumisika yemabasa nhasi uye mangwana," akadaro Dr. John Meyer, purezidhendi weHodges University. “Iyi chikuva nyowani ichapa mashopu, makirasi, uye zvirongwa zvinogona kugadziridzwa kukodzera chero indasitiri, uye kuitwa semunhu mumwechete kana seboka rekambani. "Izvi ndezve kungopa vashandi vedu mukwikwidzi."
Aya mapurogiramu ekuvandudza vashandi ane urefu hwakasiyana uye akagadzirirwa kupa vatori vechikamu nekukurumidza hunyanzvi hunoshanda hwavanogona kuisa kuzoshanda zuva rinotevera. Izvi zvakasiyana nezvirongwa zvechinyakare zvedzidzo zvinopihwa neYunivhesiti, uye zvinogona kutorwa nemunhu chero anofarira. Hapana pre-yekubvuma kuyedzwa kana yapfuura koreji chiitiko, kana kunyangwe diploma rechikoro chepamusoro inodiwa.
Musangano wekutanga, iyo Yekutanga Line Supervisor chitupa chirongwa, yave kuwanikwa uye ichigamuchira kunyoreswa. Chirongwa ichi chinowanikwa zvese semusangano paHodges University kambasi kana zvizere online.
Pakupera kwemhando ipi neipi, vanopedza kudzidza vanogashira yavo yekutanga Line Supervisor Chitupa kubva kuHodges University.
Nei First Line Supervisor Kudzidziswa?
"Regional Demand Occupations List ye2019-2020 inoratidza kudiwa kukuru kwevatariri vemutsara wekutanga vane mikana inopfuura zviuru zvina," akadaro Dr. Meyer.
Nzvimbo idzo dzinoda maneja manejimendi ekutanga dzinosanganisira vashandi mumabasa ekuvaka uye anotora, vanamakanika, vanogadzira uye vanogadzirisa, vatengesi vasiri vekutengesa, hofisi uye rutsigiro rwehutungamiriri, sevhisi yebasa, kutengesa kwekutengesa, kuchengetedza dzimba nekuchenesa, kugadzira nzvimbo nehuswa basa, uye kutakura uye zvinhu -kufambisa muchina uye vanoshandisa mota.
PET Hodges Batanidza
Zvimwe zvirongwa zviripo zvinosanganisira iyo Professional Kubudirira Chitupa (PEC) - yechishanu-kosi chirongwa chakanangana neunyoro hwekuvandudza hunyanzvi muhunyanzvi, kutaurirana uye bhizinesi - uye. iyo Professionalism muChitupa cheKushandira - kosi ipfupi yekugadzirira vadzidzi vekunodzidziswa, kana kune chero munhu arikutsvaga rake rekutanga basa. Mamwe mashopu anowanikwa anosanganisira ehumwe mutsauko munzvimbo yebasa, kutama kubva kune vezera kuenda kumutungamiriri, uye kugona kwetsika. Mimwe misangano yemusangano inosanganisira kugadzirisa gakava, hwaro hwemitauro yemuviri, kuve mukuru anodiwa, kukurudzira kwevashandi, ungwaru hwepamoyo, zvikwata zvepamusoro-soro, kuchengetedzeka munzvimbo yebasa, manejimendi yenguva, kuvaka timu, basa revatengi, hunyanzvi hwesangano uye hutungamiriri hwekushandura.
Munzvimbo yehutano, PET Hodges Connect inopa makirasi mu Basic Life Support, Basic Life Support Refresher, uye Heartsaver First Aid Cardiopulmonary Resuscitation Zvoga External Defibrillator.
Kuuya munguva pfupi, zvitsva zvinopa nzvimbo yehunyanzvi, kusanganisira AUTOCAD uye ADOBE Software.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve PET Hodges Batanidza, email HodgesConnect@Hodges.edu Kana kushanyira Nzira.Hodges.edu/HodgesConnect.
Tags: #HodgesConnect, kudzidza, Vashandi